Canarias waxay adeegsataa FDCAN si ay u maalgeliso 90 mashruuc oo tamarta la cusboonaysiin karo ah. Cusbooneysiinta Cagaaran
Tomas Bigordà | | Biyomareenka, Awoodda dabaysha, Tamar-dhuleedka, tamarta Haydarooliga, Tamarta Qoraxda Photovoltaic, Tamarta kuleylka ee kuleylka ah, Tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Thanks to Sanduuqa Horumarinta Jasiiradaha Canary, FDCAN, in ka badan 90 mashruuc oo lagu horumarinayo maaraynta tamarta oo ay soo bandhigeen dawladaha hoose iyo jaamacadaha iyo golayaashu, waxay heli doonaan maalgelin dhan 228 milyan oo yuuro.
Dowlada jasiiradaha Canary ayaa ka warbixisay mashaariicdan ujeedadiisu tahay in la kordhiyo el isticmaalka tamarta dib loo cusboonaysiin karo, hagaajinta waxtarka tamarta iyo horumarinta dhaqdhaqaaq waara, si looga hirgaliyo moodel tamar aad ugu habboon jasiiradaha Canary.
Mudane Fernando Clavijo, madaxweynaha hada ee Canary Islands, wuxuu bayaanka ku cadeeyay in dhul kamid ah sida Canary Islands Waa lagama maarmaan in la dhiirrigeliyo mashaariicda u oggolaanaya dhiirrigelinta keydinta tamarta iyo waxtarka, yareynta kharashyada iyo horumarinta horumarka qaab waara oo tartan leh.
Clavijo waxay tixgelineysaa in jasiiradaha Canary ay leeyihiin xaalado dabiici ah oo qumman, oo u oggolaanaya kor u qaadista horumarinta cusboonaysiinta, ma aha oo kaliya in loo dhaqaaqo dhanka isbeddelka qaabka tamarta, laakiin sidoo kale waa waxqabad lagu ballaadhinayo dhaqaalaha jasiiradaha, sidaasna lagu kordhinayo waxsoosaarkooda.
Mashaariicda kaladuwan ee ay diyaarisay dowlada deegaanka si ay uga hesho maalgalinta FDCAN waxaa ka mid ah waxqabadyo iyo talaabooyin kala duwan oo looga golleeyahay yareynta kororka xoogan ee baahida korontada, yareynta ku tiirsanaanta shidaalka foosha iyo qiiqa CO2, iyo sidoo kale kororka culeyska cusboonaysiinta ee isku dhafka tamarta.
Intaa waxaa dheer, ficillo dhowr ah ayaa la qorsheeyay oo la xiriira hagaajinta waxtarka tamarta iyo socodka waara iyo caqliga, iyadoo loo marayo habab yar oo wasakheyn ah.
Dowladdu waxay tilmaamaysaa taas gudaha Fuerteventura waxay qabsan doontaa koronto siinta beeraha xoolaha iyada oo loo marayo tamar ku filan oo la cusboonaysiin karo, kuma xirna shabakadda.
Iftiinka dadweynaha waxaa ku shaqeeyn doona tamar la cusboonaysiin karo oo ku saabsan aagagga kala duwan ee jasiiradda, marka lagu daro kor u qaadista is-cunidda dhismooyinka dadweynaha iyo dib u soo celinta.
En Gran Canaria, Cabildo wuxuu horay u arkay, ficilada kale, rakibida marawaxadaha dabaysha iyo xayndaabyada sawir-qaadista ee dhir dhowr ah oo dhir-jaris ah iyo dhir daaweyn ah, dhismaha saddex beerood oo dabaysha ah ama hirgelinta dhirta sawir-qaadista ee dhismayaasha iyo sidoo kale nalalka dadweynaha ee leh teknolojiyada LED-ka iyo rakibidda. ee dib-u-buuxinta meelaha baabuurta korontada ku shaqeeya.
Hindise kale ayaa ah kan Jaamacadda Las Palmas de Gran Canaria, Tani waxay fulin doontaa afar ficil si loo hagaajiyo waxtarka tamarta iyada oo la maalgalinayo nalalka iyo otomatiga guriga, iyadoo la casriyaynayo kaabayaasha ku xeeran ee dhismooyinka iyo saqafyada. Marka lagu daro dayactirka iyo la qabsiga qalabka korontada ee lix dhisme.
The Cabildo de Tenerife waxay soo jeedineysaa ficilada R + D + i geeddi-socodka barashada badda ee ku jira biyaha; uruurinta tamarta iyo maaraynta culeyska si loo yareeyo isticmaalka ITER; nidaam qaboojiye hawo-dhuleed heer sare ah oo loogu talagalay qaboojinta D-Alix Datacenter ama barashada awooda tamarta dhuleed ee jasiiradda si loo soo saaro koronto iyo isticmaalka kuleylka.
Abuuritaanka Machadka Teknolojiyada iyo Tamarta Cusboonaysiinta iyo qorshe lagu yareynayo isticmaalka tamarta ee dhismayaasha dadweynaha ee koonfur-galbeed ee jasiiradda ayaa sidoo kale la qorsheeyay.
En La GomeraTallaabooyinka sida bixinta nalalka sawir-qaadista ee shabakadda jasiiradda ee canopies ee gaadiidka rakaabka wadada ayaa la fulin doonaa; abuurista shabakad isle'eg oo dhibco dib looga buuxinayo gawaarida korontada ama abuuritaanka baarkinka tamarta sawir qaadaha oo la xiriira beero lo '.
Gudaha Lanzarote rakibi doonaa beeraha dabaysha cusub, oo leh awood dhan 9,2 megawatts, oo ku kala yaal Teguise, Arrecife iyo San Bartolomé, warshad sawir qaade ah oo ku taal Maneje iyo beero dabaysha iskeed isu isticmaasha oo ku taal Punta de los Vientos. Intaa waxaa dheer, shaqo ayaa laga qaban doonaa kordhinta waxtarka tamarta ee nalalka dadweynaha iyo kor u qaadista isticmaalka qashinka oo ah isha tamarta dib loo cusboonaysiin karo.
In Las Palmas, isaga Golaha wuxuu horay u sii qoraa mashruuca nooca tamarta cusub iyo waxqabadka dabaysha, sawir qaadista iyo tamarta kuleylka kuleylka. Intaa waxaa sii dheer, tallaabooyin ayaa la sii odorasayaa oo ku saabsan adeegsiga wax soo saarka beeraha iyo dhirta, ficilada ku saabsan tamarta tamarta yar yar iyo mashaariicda tamar-dhuleedka, ha ahaato mid hooseeya ama sareeya.
El Golaha El Hierro waxay ku samayn doontaa hagaajin shabakada wadada waxayna dhiiri galin doontaa barakaca dadka lugaynaya iyo kuwa baaskiil wadista a Qorshaha Socdaalka Waara. Tani waxay ka kooban tahay dhowr fal, sida tan hagaajinta wadada Bentama, abuuritaanka jid-gooyooyinka isgoysyada iyo laamiga waddada xeebta, jidadka cusub ee baaskiillada, iyo kuwo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » 228 milyan oo ka mid ah Canary Islands Fdcan ayaa loo isticmaali doonaa 90 mashruuc oo dib loo cusboonaysiin karo